Madeleine Albright oo geeriyootay
Madeleine Albright, oo ahayd haweeneydii ugu horreysay ee Xoghaye Arrimaha Dibadda ka noqota Mareykanka, ayaa u geeriyootay cudurka Kansarka, sida qoyskeeda ay Arbacadii shaaciyeen, waxayna aheyd 84-jir.
Madaxweyne Bill Clinton ayaa Albright u doortay diblomaasiga ugu sarreeya Maraykanka sannadkii 1996-kii, waxayna xilkaas ku soo shaqeysay afartii sano ee ugu dambeysay ee maamulkii Clinton. Waxay hore u ahayd safiirka Mareykanka ee Qaramada Midoobay.
Wakhtigaas, waxay ahayd haweeneydii ugu darajada sarreysay taariikhda dowladda Mareykanka.
"Waxaa inaga geeriyootay hooyo, ayeeyo, walaal, eeddo iyo saaxiib qaali ah. Waxaa ku hareereysnaa ehelka iyo asaxaabta" ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay qoyska Albright oo lagu daabacay Twitter-kaa, kaas oo lagu xaqiijiyay geerideeda.
Sannadkii 2012-kii, Madaxweyne Barack Obama ayaa Albright ku abaalmariyey billadda xorriyadda, oo ah billadda ugu sarraysa ee la siiyo qof rayid ah, isagoo sheegay in nolosheeda ay dhiirri-gelin u tahay dhammaan dadka Maraykanka ah.
Kaddib ka tegisteedii wasaaradda arrimaha dibadda, Albright, waxay sidoo kale ka mid aheyd dadka kor yimid siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweyne Bush, iyadoo ku dhaleeceysay in halbeegga uu arrimaha dibadda ku saleyay uu ahaa awood, 'halkii uu kobcin lahaa diblomaasiyasadda xulufada Mareykanka."
Waxay sheegtay in Bush uu iska riixay hoggaamiyayaashii Carabta ee qunyar socodka ahaa, taas oo abuuray suurtagalnimada khilaaf khatar ah oo kala dhexeeya xulafada reer Yurub, waa sida ay hadalka u dhigtay Madeleine Albright.
Qoyska Albright ayaa kasoo qaxay Czechoslovakia sanadkii 1939-kii markii Naasiyiintu ay qabsadeen dalkooda, waxayna sanadihii uu socday dagaalkii adduunka ay ku qaateen magaalada London.
Caasho Ibrahim Aden ayaa taariikhda Albright ka wareysatay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka Caalamiga ah oo jooga Gobolka Virginia.